Kamiin Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Kamiin Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose waxey sheegayaan in saaka ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar dhabba gal ah u dhigeen kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta AMISOM oo ay la socdeen maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Kamiinka waxa uu sigaar ah kaga dhacay duleedka degmada Qoryooley ee gobalka Shabeelada hoose’iyadoona kamiinka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Kulanyada weerarka dhabba galka ah loo dhigay ayaa markii hore ka baxay degmada Qoryooley’iyadoona markii dagaalka muddo socday ay danta ku qasabtay shisheeyaha iney dib ugu laabtaan degmada Qoryooley.
Qaar ka mid ah shacabka degmadaasi ayaa xaqiijiyay in ciidamada Kufaarta iyo kuwa Murtadiinta degmada lasoo galeen meydadka iyo dhaawacyada askar isugu jirta shisheeyaha iyo kuwa dowlada Ridada federaalka.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowlada Ridada federaalka.